बेलुका ढिला खाना खानाले पर्नसक्छ स्वास्थ्यमा गम्भीर असर जानिराखाैँ - ज्ञानविज्ञान
तपाईं बेलुकाको खाना कुन समयमा खानुहुन्छ ? शारीरका लागि आवश्यक पर्ने खाना खाने समयमा ध्यान दिइएन भने त्यसले तपाईंको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पार्न सक्छ । स्वास्थ्य जीवनयापनका लागि राती ८ बजेभन्दा अगाडी नै खाना खानुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
अहिले बदलिंदो समयसँगै मानिसको जीवनशैलीमा पनि तिब्र रुपमा परिवर्तन आइरहेको छ । पहिले पहिले मनिसहरु बिहान छिटो उठ्ने गर्थे र राति छिटो सुत्थे, तर अहिले राति ढिला सुत्ने र विहानपनि ढिला उठ्ने बानी आधुनिक जीवनको पर्याय जस्तै बनेको छ ।
यसरी राति ढिला सुत्दा मानिसहरुमा खाना खाने बानी पनि ढिलो हुन थालेको छ । यसले मानिसको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्न सक्छ । ढिला खाना खाँदाको असर यस्तो छ ।
१. सुत्नमा समस्या हुन्छ
२. पाचन प्रक्रियामा समस्या
३. तौल बढ्नु
४. गब्लड प्रेसर बढ्छ
Don't Miss it भान्छामा लुकेका हुन्छन् तौल घटाउने यी सामाग्री जानिराखाैँ
Up Next धुम्रपान छाड्न सकिरहनु भाको छैन भने यी टिप्स उपयोगी हुनसक्छ जानिराखाैँ